बुलबुल नेपाल | स्वास्थ्य
मङ्गलबार ०७, साउन २०७६ ००:२४
बिहिबार, १९ असार २०७६ बुलबुल नेपाल
धनगढी उप–महानगरपालिकाका प्रमुख नृपबहादुर वडले स्वास्थ्य क्षेत्रमा महिला स्वास्थ्य स्वयं सेविकाको अमूल्य योगदान रहेको बताएका छन् । बिहीबार उप–महानगरपालिकाको स्वास्थ्य शाखाले आयोजना गरेको महिला स्वास्थ्य स्वयं सेविकासँगको बार्षिक समिक्षा कार्यक्रममा बोल्दै नगरप्रमुख वडले सामान्य पारिश्रमिक बिना वर्षौदेखि सेवा दिइरहेका स्वयं सेविकाको जति बर्णन गरेपनि कमै हुने बताए ।
जान्नुहोस्, बालबालिकाका लागि पोषण टिप्स
बाल्यावस्था शारीरिक तथा मानसिक वृद्धि विकासको अवस्था हो । यो समयमा बालबालिकालाई पोषणको अत्यधिक खाँचो हुन्छ । तर, पोषणबारे उपयुक्त जानकारीको अभावका कारण आर्थिक अवस्था कमजोर भएकामा मात्र नभई हुनेखाने वर्गका बच्चामा समेत पोषणको कमी हुने गरेको पाइन्छ ।
‘माया मेट्रो अस्पताल’ मेरुदण्ड भाच्चिँएका विरामीको गन्तव्य बन्दै
जिल्लाको धनगढी उप–महानगरपालिका–६ चटकपुर स्थित माया पेट्रो अस्पताल प्रा.लि हड्डी र मेरुदण्ड भाच्चिँएका भाच्चिँएका विरामीका लागि नयाँ गन्तव्य बन्दै गएको छ । सञ्चालनमा आएको छोटो अवधीमै अस्पतालले जटिल प्रकारका विरामीको सफल उपचार गर्न थालेपछि माया मेट्रो हड्डी तथा मेरुदण्ड भाच्चिँएका विरामीको लागि नयाँ गन्तव्य बन्दै गएको हो ।
यसकारण आउँछ डन्डिफोर, कसरी जोगिने?
आइतबार, १२ जेठ २०७६ बुलबुल नेपाल
छालामा हुने एक प्रकारको तैलिय ग्रन्थीका कारण अनुहारमा डन्डिफोर आउने गर्छ ।सामान्यतया छालालाईकोमल राख्नका लागि उक्त ग्रन्थीले चिल्लो पदार्थ पैदा गर्ने गर्छ । युवावस्थामा हर्मोनको गडबडीका कारण उक्त ग्रन्थीमा असन्तुलन आई डन्डिफोरले सताउने गर्छ।महिनावारी अनियमित हुने महिलालाई पनि डन्डिफोरले सताउने गर्छ ।
किन झर्छ पुरुषको कपाल? जान्नुहोस् रोकथामका उपाय
शुक्रबार, १० जेठ २०७६ बुलबुल नेपाल
उमेर नपुग्दै कपाल झर्ने समस्या भएका पुरुषको संख्या पछिल्लो समय बढ्दो छ । कपाल झर्नु आफैँमा रोग भने होइन । पुरुषमा कपाल झर्नुको मुख्य कारण वंशानुगत गुण हो।
कस्ता छन् दालचिनीका फाइदा?
मङ्गलबार, ३१ बैशाख २०७६ बुलबुल नेपाल
दालचिनी प्रायः सबैले सुन्नु भएको होला । तर, यसका फाइदाबारे कमैलाई थाह हुन सक्छ । यसकारण आज दालचिनीका फाइदा जानकारी गराउँदै छौं ।
जान्नुहोस्, पायल्स भए के गर्ने, के नगर्ने?
पायल्स भएमा हरेक दिन शारीरिक व्यायाम गर्ने । नियमित रुपमा योग गर्ने, प्रशस्त पानी पिउने । हरियो सागपात काँचै खाने, दैनिक रुपमा फलफूल खाने । खानासँग मुला, काँक्रो र गाँजर खाने।
यी हुन् स्याउ खादाका फाइदा
बुधबार, २५ बैशाख २०७६ बुलबुल नेपाल
दिनको एउटा स्याउ खाँदा डाक्टरकहाँ धाउनुपर्दैन भन्ने पुरानो उखान नै छ । वास्तवमा स्याउ एकदमै स्वस्थकर खानेकुरा हो । स्याउमा एन्टीअक्सिडेन्ट, फाइबर र फ्लेभोनोइड प्रशस्त पाइनछन् ।
यस्ता छन्, गर्मीमा छालालाई चमकदार राख्ने उपाय
मङ्गलबार, २४ बैशाख २०७६ बुलबुल नेपाल
गर्मी मौसममा छालामा विभिन्न समस्या देखिने गर्छ । अनुहारमा डण्डीफोर, राता दाग आदि देखिन्छन् । घरेलु उपायबाटै यसबाट बच्न सकिन्छ। त्यसको लागि चामलको पिठोलाई रातभर भिजाउनुस् ।
यसरी जोगिन सकिन्छ बर्डफ्लूबाट
बि.स. २०६५ मा पहिलोपटक झापामा बर्डफ्लू देखिएको थियो । त्यसयता देशका विभिन्न भागमा पटक–पटक कुखुरामा बर्डफ्लू देखिइसकेको छ ।
जान्नुहोस्, यस्ता छन् हाँस्नुका फाइदा
सोमबार, १६ बैशाख २०७६ बुलबुल नेपाल
हँसमुख अनुहारले अरूको मन सजिलै जित्न सक्छ । त्यसैले, हँसिलो मुहार भएको मानिस सबैको प्यारो हुन्छ । प्रायः सफल मानिसका पछाडि हाँस्नु अर्थात् खुसी रहनुले विशेष अर्थ राखेको हुन्छ । अर्थात्, जस्तोसुकै परिस्थितिमा पनि जो मुस्कुराउन सक्छ, उसैको जीवन सफल हुन्छ ।
कसरी थाहा पाउने डिहाइड्रेसन भएको? जान्नुहोस्
बुधबार, १३ चैत २०७५ बुलबुल नेपाल
नियमित पिएको पानीले थुप्रै रोगबाट बचाउँछ । त्यसैले हाम्रो शरीरका लागि पानी अत्यावश्यक छ । शरीरमा पानी बढी वा कमी हुन सक्छ । यी दुबै अबस्था स्वास्थ्यका दृष्टिकोणले ठीक होइन ।
कसरी रिस शान्त पार्ने? जान्नुहोस् यी उपाय
आइतबार, १० चैत २०७५ एजेन्सी
रिस एउटा सामान्य भावना हो । यद्यपि, रिसकै कारणले कहिलेकाहीँ विभिन्न समस्या निम्तिन सक्छन् । झै–झगडा, द्वन्द्व, कलह, आक्रमण, हत्याजस्ता गम्भीर समस्या पनि रिसकै कारणले हुन्छन् । रिसलाई नियन्त्रण गर्न नसकेमा मानिस जे पनि गर्न उद्यत हुन्छ ।
जान्नुहोस्, आइसक्रिमका फाइदा–बेफाइदा
बिहिबार, ०७ चैत २०७५ बुलबुल नेपाल
आइक्रिम विशेषगरी गर्मीे मौसममा रुचाइन्छ । चैत लागेसँगै बजारमा आइसक्रिम खानेको संख्या पनि बढ्न थाल्दछ ।
बच्चालाई पर्याप्त दूधको लागि आमाले के खाने?
बच्चालाई स्वस्थ र तन्तुरुस्त पार्ने सबैभन्दा उत्तम आहार आमाको दूध हो । स्तनपानले सुत्केरी आमा र बच्चा दुबैको स्वास्थ्यका लागि सकारात्मक भूमिका खेल्छ ।
धनगढी डाइग्नोष्टिकको दोस्रो वार्षिकोत्सव सम्पन्न, ३०६ जनाको निःशुल्क सुगर जाँच
सोमबार, २७ फागुन २०७५ गगन अयडी
कैलालीको धनगढीमा रहेको धनगढी डाइग्नोष्टिक एण्ड रिसर्च सेन्टरले आफ्नो दोस्रो बार्षिकोत्सव विभिन्न रोगको परीक्षण गरेको छ । प्रा.लिले ३ सय ६ जनाको निःशुल्क सुगर, ५० प्रतिशत छुटमा एक सय ५ जनाको थाइराईड र १ सय ३९ जनाको होलवडी परीक्षण गरेको हो ।
दृष्टि फाउन्डेसनलाई धनगढी डाइग्नोस्टिक्सद्वारा आर्थिक सहयोग
आइतबार, २६ फागुन २०७५ गगन अयडी
कैलालीको धनगढी स्थित धनगढी डाइग्नोस्टिक्स एण्ड रिसर्च सेन्टर प्रा.लिले तिन दिनसम्म विभिन्न कार्यक्रम गरी दोस्रो वार्षिकोत्सव बनाएको छ । होलवडी चेकअप, थाइराड, एचआइभी, सुगर रोगको परीक्षण गर्दै प्रा.लिले दोस्रो वार्षिकोत्सवमा मनाएको हो ।
गाँजा स्वास्थ्यका लागि कति हानिकारक?
सोमबार, २० फागुन २०७५ बुलबुल नेपाल
पशुपतिनाथसँगै देशका विभिन्न शिव मन्दिरमा आज महाशिवरात्रि पर्व मनाइँदै छ । भगवान् शिवको प्रसाद भन्दै विशेषगरी अधिकांश युवा जमात गाँजा, भाङजस्ता नसालु पदार्थ सेवन गर्छन् । प्रशासनको रोकावटबीच पनि शिवरात्रिका दिन लुकीचोरी नसालु पदार्थ सेवन गर्ने परम्परा नै बनिसकेको छ ।